ओलीको २ बर्षे कार्यकाल सफलता भन्दा बिबादास्पद असफलता बढी , संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यस्तो – www.agnijwala.com
काठमाडौं । जनताको अत्याधिक मतबाट बनेको ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार शनिबार दुई बर्ष पुरा हुँदैछ । कम्युनिष्टको ब्यानरमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा दिएर नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०७४ फागुन ३ गते दोस्रो कार्यकालको लागि सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए ।
निरन्तर अस्थिर, मिलिजुली सरकारको चपेटामा गुर्जिएर वाक्क दिक्क भएका नेपाली जनता दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले चुनावि गठबन्धन बनाउँदै पार्टी एकतासम्म पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । र, कम्युनिष्टकै नेतृत्वमा स्थिर सरकार गठन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने प्रण गरेपछि नेपाली जनताले दुईतिहाइको अत्याधिक मतबाट अनुमोदन गरे ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली जनताको आशा र अपेक्षा पुरा गराउने तहमा सुविधाजनक बहुमतको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ओली नेतृत्वको दुई बर्षे कार्यकाल आम जनताको अपेक्षा, नेकपाको घोषणापत्रअनुसार राष्ट्रियता, आर्थिक उन्नति, जनजीविकाको पक्षमा काम भए नभएकोबारे हामीले विभिन्न दलका नेताहरुसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं । ओली नेतृत्वको २ वर्षे कार्यकालबारे के भन्छन् नेताहरु ? हेर्नुहोस् उनीहरुको प्रतिक्रिया :
ओली सरकार यतिको विछ्याउनामा मस्त निन्द्रामा सुतेकोे छ
चन्द्र भण्डारी, नेपाली कांग्रेस
वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रियता र गतिशिलताको आधारमा नेपाली जनताले अत्याधिक मत दिएका हुन् । र, यो सरकार बनिसकेपछि काम भन्दा भाषणमा बढि र आफ्नो धरातल केहो भन्ने कुरा यो सरकारले विश्लेषण गर्न सकेन । त्यसकारण यो सरकारको खुट्टी चाहिँ मेलम्चीले देखायो । कति विकास भयो भन्दा विकास खर्चै नभएर देखायो । क्षमतको पहिचान कार्यशैलीले देखायो । यी तीनवटा कुरा सरकारको कमजोरी देखिए ।
राष्ट्रियताको दृष्टिकोणमा नेताहरु आफ्ना घर बनाउने, घरका पर्खाल बनाउने नेपाली जनताले कर तिरेर पालेका सेना, पुलिस राख्ने, जनतालाई रवाफ देखाउने देखिए । नेताहरु कमाउने धन्नामा लागे । सीमा सुरक्षा हल हुन सकेन । आफ्नो सीमा मिचिदा पनि भारतसँग यो सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन । डुवानका कुरा, सीमाका कुरा, जनताको आवश्यकताको कुराहरु सरकारले पुरा गर्न सकेन । दुईतिहाइको बलियो सरकार पनि विगतको निरन्तरता जस्तो भयो । भ्रष्टाचारको सवालमा ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेस्नलको रिपोर्ट अनुसार नेपालको भ्रष्टाचारको लेबल घट्दै गएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तथापि राजनीतिक भ्रष्टाचार घटेन ।
सरकार यतिको विछ्याउनामा मस्त निन्द्रामा सुतेकोे छ । ठेकेदारहरुले नेपालको विकासको गतिलाई धेरै पछि पारेको छ । त्यसको अन्त्य गर्न सरकार असफल भयो । न्यारो बडि, वाइड बडिमा ठेकदारहरुसँग मिलेर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काममा लिप्त भएको छ । यसले गर्दा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको छ ।
यो सरकारको राम्रो पक्ष पनि छ । ओली सरकार बनेपछि वैदेशीक सम्बन्धमा राम्रो पनि देखिएको छ । तथापि ओली जी शारिरीक हिसाबले निकै कमजोर छन् । तर, उनको जोश र जाँगरमा कुनै कमी देखिएको छैन । तर उहाँले चलाएको पंखाहरु उहाँकै मन्त्रिमण्डलमा खिया लागेको छ ।
दुई बर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको सोंच भनेको लहडी सोंच हो भन्ने कुरा पटाक्षप भएको छ
सूर्यराज आचार्य, साझा पार्टी
बहुदल स्थापनापछि सधै अस्थिर, मिलिजुली र भागबन्डाको सरकार निर्माणको जुन श्रृखला चलेको थियो । कम्युनिष्ट सरकार आएपछि त्यसको अन्त्य भएको छ । यो एउटा सवल पक्ष हो । सधैं अस्थिर, राष्ट्रियताको पक्षमा कमजोर, जनजीविकाको पक्षमा काम गर्न सकेन भनेर सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टिबोध भएको अवस्थामा ओली सरकार बनेपछि केही सकारात्मक आशा जगाएको थियो ।
मुलुक संविधान निर्माण, संघीयतामा गएको अवस्थामा विकास निर्माण, समृद्धि, सुशासनकोलागि धेरै संरचनात्मक फड्को मार्नुपर्ने जिम्मेवारी ओली सरकारलाई थियो । संरचनात्मक परिवर्तनमा राज्य संचालनको आधारभुत शैलीमा परिवर्तन, कर्मचारी संचालनमा परिवर्तन, विकासको नीति र खाकामा परिवर्तन, कार्यान्यनको शैलीमा परिवर्तन यी सबै चिजमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि थियो । बलियो सरकारले गर्न पनि सक्थ्यो । तर, दुई बर्षपछि आएर हेर्दा के प्रष्ट भयो भने त्यो एउटा राष्ट्रिय जेम्मेवारी तहमा, बुझाइको तहमा र कार्यान्वनको तहमा अहिलेको सरकारले कामै गर्न सकेन । यो सरकारले बुझ्दै बुझेन ।
अर्को तहमा यो सरकारको ठिक नियत पनि रहेनछ । ओलीे सरकारले नियम कानून मिलाएर राज्य दोहन गर्नमा व्यस्त भयो । प्रधानमन्त्री लेबलबाट के आएको छ भने कानून संगतरुपमा काम भइरहेको छ भनेका छन् । कर्मचारीको पनि यही तर्क आउँछ । अचम्मको कुरा के छ भने लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा कानून सम्मत भनेको न्यूनतम कुरा हो । राजनीतिक सम्मत हुनुपर्छ । उहाँले भनेको कानूनी कुरा त रकमी कुरा भयो ।
आम जनतामा के विश्वास हुनुपर्यो भने मैले चुनेर पठाएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा पुगेपछि हाम्रो विश्वास जितेर काम गरेको छ । कानूनीरुपले केहि तलमाथी पर्यो होला तर राजनीतिकरुपले सहि काम गरेको छ भन्ने हुनुपर्यो । तर, विस्तारै जनतामा अविश्वास बढ्दै गएको छ । यो राम्रो रक्षण होइन । त्यसैले यो सरकार पुरै असफल रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र राष्ट्रियताको पक्षमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको एजेण्डा हामीले समर्थन गरेका थियौं । तर, दुई बर्षको दौरानमा सरकारको कामकारवाही हेर्दा एकदमै निरासाजनक रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको विकासप्रति जुन दृष्टिकोण थियो । अहिले उहाँको सोच सूचित, योजनाबद्ध र भिजनरी दृष्टिले आएको रहेन छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । यसलाई अलि खरोरुपमा भन्नुपर्दा उहाँ अलि हावादारी देखिनुभएको छ । उहाँमा विकास र समृद्धिमा स्पष्ट सोच, चिन्तन, गहिराइको मापन गर्ने खुबी उहाँमा रहेन छ । उहाँको अहिलेको सोच भनेको लहडी सोच हो भन्ने कुरा पटाक्षप भएको छ । उहाँलाई शंकाको लाभ आम जनताले दिएका थिए त्यो पुरा गर्न सक्नुभएन । बलियो सरकार लिएर सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि विकास र समृद्धिको सोचलाई ठुलो अन्याय गर्नुभएको छ ।
पार्टी र सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा जनअपेक्षा अनुरुप काम हुन सकेन
हरिबोल गजुरेल, नेकपा
मुलभुतरुपमा सरकारले ठिकै ढंगले काम गरिरहेको छ । जन अपेक्षा ठुलो छ । सरकारले जुन अपेक्षा बोकेर सरकार गठन भएको थियो त्यसअनुरुप काम हुन नसकेको सत्य हो । यो सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेपनि संतोषजनक मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सरकारको काम सकारात्मक भएपनि जनअपेक्षाअनुरुप अझै हुन सकेको छैन ।
सीमा विवाद, विकास निर्माण, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालमा सरकारले पहल गरीरहेको छ । यो रातारात हुने परिवर्तन हुने विषय पनि होइन । सीमा समस्या हल गर्न भारतसँग पनि कुटनैतिक पहल भइरहेको छ । पार्टी एकिकरण गर्नै दुई बर्ष लागेकोले पनि सरकारको काममा केही समस्या आएको हो । यसबीचमा एकताप्रकृया अगाडि नबढ्दा सरकार र पार्टीबीचमा समन्वय हुन सकेन । सरकार र पार्टीबीचमा समन्वय बन्दै छ ।
अब सरकारको कामले गति लिन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । सरकार संचालनको काममा आम जनता पूर्ण सन्तुष्ट हुन्छन भन्ने छैन । आम मनोविज्ञान नै नकारात्मक बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले राम्रोनराम्रो जे गरी पनि टिकाटिप्पणी हुन्छन् ।
राष्ट्रियताको बारेमा सरकारले एउटा माखो पनि मार्न सकेका छैन
चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चा
दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारबाट जनताले जुन अपेक्षा र भरोसा गरेको थिए । त्यसमा सन्तुष्ट हुने काम गर्न सकेन । चुनावी घोषणा पत्रमा जनतालाई जुन आश्वास दिएका थिए । ओलीको सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । राष्ट्रियताको बारेमा ओली सरकारले एउटा माखो पनि मार्न सकेका छैनन् । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार भए पनि ढुलमुल गरिरहेका छन् । कतिपय स्थितिमा घुँडा टेक्ने स्थिति पनि देखिन्छ ।
भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्ने सवालमा केहि सन्तोस गर्ने ठाउँ देखिन्छ । तर, पूर्ण छैन । ठुला भ्रष्टचारीलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । अहिले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सरकारले जुन अभियान चलाएको छ । यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । यी बाहेक जनजीविका विकास निर्माण कार्यमा खासै सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । यो सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सबै ठाडा छन् । जसको साथमा जे सामान छ उसैले मोल गरेर बेचिराखेका छन् । सुशासन र महंगी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार पुरै असफल भयो
रामजनम चौधरी, समाजवादी पार्टी
ओली सरकार पूर्णरुपले असफल रहेको छ । सरकारमा बसेर लुट मच्चाएको छ । आफु र आफ्नालाई बाहेक अन्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम एकाङकी रहेको छ । सरकारले विकासको सवालमा काखापाखा गरेको छ । जनताले जुन दृष्टिकोणबाट नेकपालाई भोट हालेर जिताएका थिए ।
सरकारले समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्न सकेको छैन । सबै गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टचारले चुर्लुम डुबेको छ । सरकारको यसमा ध्यान गएको छैन । अहिले जुन ढंगबाट प्रधानमन्त्री चलाईरहनु भएको छ । यसले पुरै नगरी अध्याँरो छ । जनताले समृद्ध नेपालकोबारेमा जुज ढंगबाट सोचेका थिए । तर, यति करको बोजबाट जनता दबेका छन् । कुनै पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आर्थिक समृद्धि प्रर्यटनको पूर्वाधार भनेर सरकारले जुन नारा दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सकेको छैन । यो सरकार भनेको नारामामात्र सिमित रहेको छ । काम एक प्रतिशतपनि अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले यस वर्ष विकासको आधार खडा गरेको र अर्को वर्षदेखि उपलब्धिका वर्षहरु हुने बताएका छन् ।
– हाम्रो देश नेपाल अहिले उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पंक्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकसम्म आर्थिक बृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र थियो । कुनै बर्ष त हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर ०।७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो । अहिले ३ वर्षयता लगातार ६।५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७।१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि थियो । विगत ३ बर्षदेखि कुनैपनि प्रदेशमा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशत भन्दा माथि बढेको छ ।
–प्रत्येक ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले रोजगारीमा कम्तिमा १ प्रतिशतले बृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता छ । हामी ६।५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा त्यही अनुपातले हेर्ने हो भने पनि रोजगारीको बृद्धि स्वभाविक रुपमा २ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा हुन्छ ।
– जलस्रोतको धनी तथा दक्षिण एशियामा विजुली उत्पदन गर्ने पहिलो मुलुक हुँदाहुँदै झण्डै सय बर्षसम्म बिजुलीको हाम्रो कूल उत्पादन ५०० मेगावाटभन्दा तलै सीमित थियो । केही समय अघिसम्म हामी दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य थियौं । अहिले विद्युतको कूल जडित क्षमता १ हजार २८६।६१ मेगावाट पुगको छ । यससँगै लोडसेडिङ्गको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत बिक्रीसमेत गर्न थालिएको छ । निकट भविष्यमा नेपाली बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतिर निर्यात गर्न आधार तयार भएको छ । बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ । २२।९ प्रतिशतमा रहेको विद्युत चुहावटलाई १५।५ प्रतिशतमा झारिएको छ । दियालो÷दियो हुँदै मट्टितेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य नै हुँदैछ ।
– विद्यालयमा खुद विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत हुँदैछ, विद्यालय छाड्ने दर २।६ प्रतिशतमा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष ९युनिसेफ०को विश्व प्रतिवेदन–‘अ वल्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ बर्षहरुमा नेपालको विद्यालय भर्ना दर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रसंशा गरिएको छ। यसले अंक पनि बोल्छ, अनुभूति पनि दिन्छ ।
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा प्रारम्भ गरिएको छ । यस योजनामा सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या १२ हजार १ सय ५५ र सूचीकृत श्रमिकको संख्या १ लाख ४८ हजार १ सय १ पुगेको छ। यही संख्यालाई लिएर ‘सरकारले नयाँ युगको शुरुवात भन्दै थालेको यस योजनामा योगदानकर्ताको व्यापक अनिच्छा’ जस्ता प्रचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । आयकरको सिलिङ्गका कारण कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तामा रहेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्न हालै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले आयकर प्रयोजनकालागि आफ्नो आयबाट घटाउन पाउने रकमको सीमा रु। ३ लाखबाट बढाई रु. ५ लाख कायम गरेको छ । सबै प्रकारका रोजगारीमा संलग्नहरुको भविष्यसंग जोडिएको र मुलुकलाई कल्याणकारी राज्यमा रुपान्तरण गर्ने यस युगान्तकारी कार्यक्रमलाई आम श्रमजीवी वर्गको तहमा विस्तार गर्न जरुरी छ । यस योजनाले काम गर्ने र काम गराउने दुबै पक्षलाई उत्तिकै लाभ पु¥याउँछ । श्रम सम्बन्धलाई उद्यम÷व्यवसाय मैत्री बनाउँछ । तसर्थ, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकहरुलाई यस अभियानमा ढिलो नगरी सूचीकृत हुन म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु ।
–क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटी पूँजीगत खर्च कम हुनमा कारण देखिन्छ । शहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्व ३९ अर्ब ४७ करोड ९२३,९४७ करोड० अर्थात् ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । अझ खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । मैले पहिले नै चर्चा गरी सकेको छु, सरकारले विरासतमा पाएको यस्ता कैयौं वेथितिलाई अहिले सच्याउँदैछ । अधुरा अपुरा कामलाई सम्पन्न गर्दैछ । यसका लागि सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा सुधार गरी विभिन्न कारणले अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको छ । यसले अधुरा आयोजना लाई सम्पन्न गराउन र समग्रमा पूँजीगत खर्च बृद्धि हुन सहयोग पु¥याउने छ ।